Okujiyile Cooper PCB - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
I-PCB ebambisene kakhulu
I-Fumax - Inkampani ekwaziyo ukwenza imikhiqizo ehlukahlukene ye-PCB yethusi. Ngolwazi oluningi, saziwa ngokukhiqiza imikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu kumakhasimende ethu. Futhi iFumax nayo iyakwazi ukwenza ngezifiso i-PCB yethusi elincane ukuze ikwazi ukuhlangabezana kahle nezidingo zawo wonke amakhasimende.
Ububanzi bomkhiqizo we-PCB Cooper Covers onganikezwa yiFumax：
* Ungqimba layers 1-14 izingqimba） ；
I-PCB yethusi ejiyile iyakwazi ukuthwala okwengeziwe manje ngezintambo uma kuqhathaniswa nokusebenzisa enye impahla yethusi yokwenza izintambo. Futhi ukusetshenziswa kwe-PCB yethusi kuvumela ukwabiwa okulinganayo kwamandla ezishisayo ezintanjeni futhi kukhulisa namandla wezintambo endaweni yokuxhuma. Zenza futhi kube lula futhi kwenzeke ukwenza imishini emincane. Lokhu kungenxa yokuthi izintambo zingasongwa kalula ukuze zigqagqene futhi zivumele ukwakhiwa kwesikhala esithe xaxa ezintweni ezincane zokusebenza.
Ithusi elisindayo lingasetshenziselwa izinhloso ezahlukahlukene, kufaka phakathi, kepha kungagcini lapho, ukulungiswa kwamandla amakhulu, ukushabalalisa ukushisa, ama-planar transformers, abaguquli bamandla, ikhompyutha, ezempi, ukushaja imoto kagesi, uhlelo lokushintsha igridi yamandla, njll.
* Izinsiza Zokushisela
* Abenzi bePhaneli Solar
* Amandla kagesi
* Ukusatshalaliswa kwamandla kagesi
* Abaguquli bamandla